SAFE ACT - Banyere cannabis & Nnweta iji ụlọ akụ
Mkpuchi nzuzo ma zighachi anya ya
Ego bụ eze - Ya mere ndị otu Congress webatara otu n'ime ọtụtụ iwu cannabis - Iwu SAFE.
Iwu Mkpuchi Nzuzo & Ziri Ezi
Nke a bụ otu n'ime akpa YouTubes m mere azụ na February nke 2018.
Ọ dabara nke ọma, amakwuru m isiokwu ahụ. Arụsi m ọrụ ike na -emepụta ọdịnaya ndị ọzọ - nke websaịtị a - ka m wee nwee ike ịga n'ihu na ọrụ anyị nke imebi iwu cannabis kwekọrọ na eziokwu nke ihe ahụ.
Biko mee m ihe mgbasa ozi ma ọ bụrụ na m nwere ike inyere gị aka.
Soro na Social Media
"Ruo Usoro osisi cannabis 1 bụ ihe gara aga, enwere obere nhọrọ karịa ịme ego."
njikọ SAFE Iwu Nchekwa Banye Banyere:
akwukwo m na iwu cannabis
Iwu SAFE mere ihe na ịdida cannabis na Iwu A na-achịkwa (CSA) ga-eme. - ya bu, nye ndi ahia cannabis ohere inweta oru ego. Anyị raara onwe anyị nye ịtụgharị azụmaahịa naanị ego ziri ezi na America ka ọ bụrụ azụmahịa ọzọ dị na America.
Congress emeela ihe iji gbachitere Jeff Sessions na "ndị ọjọọ ya na-ese anwụrụ ọkụ" henchmen na Ngalaba nke Ikpe Ziri Ezi, mana emeghị ihe iji wepu Cannabis na CSA. Ma, ebe ọ bụ na 2013 Congress ewepụtala iwu dị ka SAFE Banking Act, nke na-ajụ ajụjụ a - ma ọ bụ welite ajụjụ a: Gini mere iwebata ụgwọ a kara aka ịnwụ?
Ulo Ochichi ekwesighi inweta mmeri maka iwebata ụgwọ ọ maara mbibi ịda mba n'ihi na Kọmitii Nchekwa ego na-abụkarị ndị kacha njọ aha ya na Senate na mgbochi cannabis Republican, Mike Crapo. Idaho - ihe ọzọ dị iche iche aha ya bụ ihe - chere na ọ dabara adaba itinye Crapo n'ọfịs, onye na-egbochi iwu cannabis nwere ikike nke na-enye Banks ike ịmegharị ụkwụ nke ụlọ ọrụ cannabis n'ime iri puku ijeri dollar, ma ọ bụ karịa.
Ezigbo Senator nke Oregon kwesịrị ịkwụsị imebi oge anyị, na Crapo, ma gosipụta ụgwọ iji belata cannabis na CSA. O nwekwara ike ịda mba, mana opekata mpe ihe karịrị 60% ndị America chọrọ ka ndị omebe iwu zue iwu inye iwu cannabis. Yabụ,, opekata mpe, anyị nwere otu puru iche nke anyị niile ga - akwagide na mmegharị ma merie ụgha dị afọ iri asatọ bụ mmachi igbo.